राहुल र स्मितको अन्तिम निर्णय: छोरिको लागि भएपनी मिलेर बस्छौँं! यो भिडियो हेर्नुहोस… – Onlines Time
February 3, 2021 February 14, 2021 onlinestimeLeaveaComment on राहुल र स्मितको अन्तिम निर्णय: छोरिको लागि भएपनी मिलेर बस्छौँं! यो भिडियो हेर्नुहोस…
राहुल र स्मितको अन्तिम निर्णय: छोरिको लागि भएपनी मिलेर बस्छौँं! यो भिडियो हेर्नुहोस्
विश्वभरि छरिएका नेपालीहरू यसलाई टाढैबाट हेर्न बाध्य छन् । नागरिक जुलुसमाथि ओली सरकारको प्रहरी दमनले ओलीको निरंकुशता र कुटिल मनसाय, धेरैलाई पहिलेदेखि नै थाहा भए पनि, अहिले सबैसामु उदांगिएको छ ।
दक्षिण एसियामै नेपालले आफ्नो नयाँ लोकतन्त्रमाथि गर्ने गरेको गौरव चकनाचुर भएको छ । प्रतिगमन सच्चिएन भने नेपाली लोकतन्त्रको आत्मा मानिने संघीयता, वाक् स्वतन्त्रता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता उपलब्धिहरू सिद्धिने निश्चित छ । लोकतन्त्रमाथि ओलीको यो हमला, नेपालको बलियो हुँदै गएको लोकतान्त्रिक राष्ट्रियतामाथिको आक्रमण उल्ट्याउन तीनपुस्ते नागरिक समाज लागिपरेको छ । तर सहिद धर्मभक्त माथेमाको स्मृतिस्थलमा भएको नागरिक समाजको भेलामा बौद्धिक तुलानारायण साहले भनेजस्तै, कतिन्जेल नेपालका तीन पुस्ता बारम्बार लोकतन्त्रका लागि आन्दोलित भइरहने, लडिरहने ?